Calamadaha Lagu Garto Macalinka Wanaagsan. - Diblomaasi
Macalinku waa bini’aadan, waa iftiinka nolasha ardayda. Macalinka wanagsan astaamo farabadan oo lasoo koobi karin ayuu leeyahay. Macalinka markasto waxa oo u taaganyahayinnuu wax baro ardayda markasto wax un buu raadiyaa si uu usoo saaro arday wanagsan. Waxaa jirra dad badan oo ay ka mid yihiin ardayda uu macalinka wax baro inaysan ogayn qiimaha uu leeyahay macalin. Macalinka haweenkii ayuu u dhafraa ardaydiisa si uu u kobciyo garaadka ardiisa, asigoo marwalbo rabbo innuu horumariyo ardaydiisa.
Macalimiinta habeenkii oo dhan waxay u dhafraan cashirkii ay u bixini lahayeen ardaydooda, iyagoo raadinaayo cashirka ugu fudud ee ardayda u leh munafacaad fiican, waliba midka ugu fudud oo ay si fudud ku fahmi karaan.
Ma ahan wax halkaan lagu soo koobi caalamadaha lagu garto macalinka wanaagsan, waxaan aad u jeclahay in wadankeenna Soomaaliya laga helo macalimiin badan oo aad ugu wanaagsan aqqoonta iyo waliba kuwa marwalbo ku hawlan horumarinta ardayda ay wax baraan.
Macalinka wanaagsan marwalbo wuxuu ardaydiisa ulla dhaqmaa sidda booska aabihiisa oo kale. Waa mid marwlabo u taagan siddii uu ku caawini lahaa ardaygiisa.
Macalinka wanaagsan waxaa lagu gartaa waa mid marwalbo u sheega qaladka uu galay ardaygiisa, maxaa yeelay waa mid og innuu saameyni karo noloshiisa haddii uu siddaasi ugu aamuso.
Macalinka wanagasan waxaa lagu gartaa in uu markasto heegan u yahay shaqadiisa, kama fikiro lacagta waxuu ka fikiraa sidduu usoo saari lahaay ardayda. Markasto sidda ardayda magac iyo sharaf u gaari lahayeen ayuu ka fakiraa.
Waxaa jira calaamado badan oo aan isleeyahay waad ka tagtay, laakinse ay wanaagsantahay in la is xasuusiyo in macalinka wanaagsani yahay mid lagu faano.
Related Topics:Calamadaha Lagu Garto Macalinka Wanaagsan.macalin wanaagsan
Waa PhD oo Qashinka Gurta, Adiguse Ma Sameyn Lahayd?
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Waxay wax ka qortaa arrimaha horumarinta bulshada, caafimaadka gaar ahaan dhalaanka iyo hooyada, cilmiga Bayolojiga, taariikhda, xisaabta, juqraafiga, cilmiga bulshada iyo waliba waayo aragnimada nolosheeda. Qoraagga waa qoraa marwalbo u hawlan horumarinta iyo isbedelka bulshada.
Maqaalkan waxa ugu talagalay in qaab elektronik ah u baahiyo sidaas darted qofkasta oo u baahan inuu daabacdo maqaalkan wuu daabacan karaa isaga oo illaalinaya lahaanshaha maqaalka. Diyaarintii iyo Qallinkii Cabdiraxman Maxamed Aaden. – Illaahay swc Bey mahad u sugnaatay, kagadaalna Nabigeenna NNKH.
Waxaan maqaalkan uga hadlayaa isbadalada ka socda qaar kamid ah wadamada islaamka gaar ahaan labbo wadan oo kamid ah wadamada ugu tunka weyn wadamada islaamka waaana, Turkiga iyo Sacuudi Carabiya. Waxaan labadaa wadan usoo qaatay waa labbo wadan oo sidaan soo sheegey Muraayad u ah Islaamka iyo Taariikh ahaanba huwan Diinta islaamka.
Sidoo kale xogtaan waxa ay ku koobantahay qarnigii tagay iyo kan lagu jiro oo kaliya iyo wadan waliba suu ahaa. Inagoo kusaleyneyna isbadaladaas qoddobada soo socda
· Hormarinta dhinaca dacwada Diinta Islaamka
· Hormarinta iyo garab qabashada Wadmada Islaamka
· Iyo hiigsiga mid waliba hiigsanayo Siduu noqon lahaa marka lafiiriyo Arrimaha la xiriira islaamka iyo guud ahaan caalamul islaami.
Hadaba kusoo dhawaada mowduuceena, Aan ku horeysiiyo Turkiga
Turkigu waxa uu ahaa xaruntii ay ku shaqeyn jirtay dowladii Cusmaaniyiinta ee u dambeysay Khilaafooyinkii islaamka soo marey. Tukigu waxa uu ahaa markaskii (xaruntii) u dambeysay ee uu ka taliyo taliska guud ee islaamka. Hadaba Turkigii ceynkaas ahaa awwoodiisii waa ay daciiftay bilowgii Qarnigii 18aad. Gaaladu waxa ay isku deydey inay inqilaabto Turkiga, dabcan weyna inqilaabtay.
1924 Mustafe Kamaal Ataaturki ayaa aasaay jamhuuriyada Turkiga. Reer galbeedku balan bey la galeen oo ahayd inaan dib dambe loo maqal khilaafo islaamiya ah iyo in shareecada islaamka la tirtiro, in lagu shaqeeyo Qaanuunka reer galbeedka Iwm. 1925 waxa uu soo saaray qaanuun mamnuucaya shacaa’irta islaamka sida:
· Gabadhu iney xijaabato
· Cimaamada madaxa lasaarto
· Salaanta Muslimiinta isku salaaman
Sidoo kale 1928 waxa uu mamnuucay:
· In shareecada islaamka labarto
· In afka Carabiga lagu adimo
· Raga iyo dumarka iney dhaxalka kasimanyihiin, Iwm.
Sidaas waxa ay kujireen muddo dheer 20 iyo dhowr sano mamnuuc bey ahayd in qof turki ah Xajka aado. Masaajidka ugu weynaa Turkiga waxaa loobadalay madxaf dadku ay booqdaan. Intaas kadib nin la yiraahdo Cadnaan Madri oo reysal wasaare ka noqday dalkaas oo hoggaaminayey xisbul Cadaala, markasuu isagoo loolan doorasho kujira ayaa diyaarad raacay kadib ayaa Beyloodkii u sheegey iney isdiyaariyaan oo ay diyaaradu dhacayso cilad jirta owgeed.
Cadnaan balan buu Illaahay ka qaaday hadduu uu Illaahay ka badbaadiyo shilkaan oo uu mar hoggaanka Turkiga qabto inuu kuceliyo islaamnimada kadib Illaahay swc kaligiis ayuu nabad galiyey intii kalana wey halaagsantay, shacabka Turkiguna waxay kujireen nolol adag waxeyna u heelanaayeen qof mar qura ka sheekeeya islaamka, dabadeed shacabkii doorashadii coddeeyey waxay u coddeeyeen Cadnaan Madri, wuuna ku guuleystay doorashadii, kadib waxa uu shacabkiisa u sheegey haddii ay dhalato bisha Ramadaan in Gabi ahaanba lagu adimo Afka Carabiga, shacabkiina aadbey ugu riyaaqeen Arinkaas, reer galbeedku aad bey arintaas uga xumaadeen dal ay soo tababa bareen oo cilmaaniyada bareen inuu xuub siibto wey ka xumaayeen.
Hadaba saas oo ay tahayba Turkiga maanta ma ahan kii hore waa mid kudhisan jaceyl diineed, iyo difaacida dadka muslimka ah, hadda hadaan wax idinkaga taabto Turkiga wuxuu maanta minjaraha u’hayo madexweyne Erdogan waa mid ku faana islaanimadiisa dalkiisa iyo dadkiisaba, Diin jaceyl ku haga. Sidoo kale waa,
· Mid kashaqeeyey sidii ay Turkiga noqon lahaa dal hormuud u ah islaamka
· Sidii loo mideyn lahaa dalalka islaamka oo la is walaalshado
· Sidii Diinta loo difaaci lahaa loogana soo horjeedsan lahaa islaam naceybka
· Difaacida dadka muslimiinta ee daafaha Adduunka ku dhaqan haddey soo wajahdo dhibaato.
· Turkigu inta badan madexdooda waxaa ka maqalnaa war na farxad galiya sida masjid horey madxaf u ahaa baa la furey iwm.
· Udoodida qadiyadaha islaaamka sida arrinta walaalaheen reer Falastiin
· Ugudambeyntii Turkiga waa wadan koraya dhaqaala ahaa, ku dhaqanka iyo barashada diinta iyo dhiirogalintaba waxaan oran karnaa waa horey usocod.
GETTY IMAGES. Dhismaha wuxuu hadda yahay midka ay booqdaan dalxiiseyaasha ugu badan ee Turkiga taga. Madxafka caanka ah ee Hagia Sophia oo ku yaal magaalada Istanbul ayaa markale loo bedalay masjid, kadib go’aan uu gaaray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Dhanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya aan u jaleecno
Waa dal ku yaal galbeedka Aasiya oo ka kooban qaybta jasiiradda Carabta. Sacuudi Carabiya ayaa ah gobolka ugu weyn ee madaxa bannaan ee Bariga Dhexe, oo ah juqraafi ahaana kan shannaad ee ugu weyn Aasiya, tan labaad ee dunida Carabta ka dib Aljeeriya iyo 12aad ee adduunka ugu weyn. Sacuudi Carabiya ayaa xuddun u ah Jordan iyo Ciraaq waqooyi, Kuwayt ilaa waqooyi bari, Qadar, Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta xagga bari, Cumaan ilaa koonfur iyo Yemen xagga koonfureed. Waxaa laga soocay Israa’iil iyo Masar Gacanka. Waa waddanka keliya ee leh xeebta Badda Cas iyo xeebta Gacanka, oo badi dhulkeeda waxay ka kooban tahay lama degaan, dhul hoose iyo buuro.
Sacuudi Carabiya waa dhaqaalaha ugu weyn ee Bariga Dhexe illaa Oktoobar 2018 iyo 18aad ee adduunka ugu weyn. Sacuudi Carabiya waa wadan muslim ah oo laga soo saaray Nabigeena Naxariis iyo Nabad galyo korkiisa ha ahaato, waa wadan ay ku yaalaan Goobo Nagu weyn haddaan nahay islaam, waxaa kuyaala xaramka.
Waa wadan Islaamku wada illaalsado maadaama uu yahay xaruntii islaamka waa mid nagu khasban inaanu Illaalino sharafta iyo karaamada Sacuudi Carabiya. Hadda Sacuudi Carabiya (dhulka hadda la isku yiraahdo Sacuudi Carabiya ayaan ka hadlayaa) waa wadan taariikh soo maray oo marxalado kala duwan soo arkay, waa waddan xudun u haa Fatuuxaad badan.
Hadaba ma doonayo inaan ka hadlo taariikhdii ay soo martay Sacuudi Carabiya balse xog yar oo kooban oo kusaabsan ayaan iftiimineynaa ee ila soco. Sacuudi Carabiya mucaasirka ahaa waxa uu ahaa,
· Wadan ku dhaqma Diinta islaamka iskuna xukuma, dhammaan shacaa’irta islaamka ahna ilaaliya oo dhowra.
· Wadan lagu barto shareecada islaamka, wadamada islaamkana ka saacida xaga faafinta dacwada islaamka
· Waxa uu ahaa wadan xudun u ah mabda ah Salafiga.
· Waxa uu ahaa wadan mar waliba isku arka kan ugu sareeya marka laga hadlaayo wax yaabaha ku saabsan Islaamka.
· Waxa uu ahaa wadan ka qeyb qaata caawinta dadka tabaaleysan ee ku dhaqan wadamada danyarta ah ee islaamka.
· Waxa uu siin jiray Waxbarasho lacag la’aan ah ardeyda islaamka ah ee daafaha dunida kala joogta.
· Waxa uu ka qeyb qaadan jirey hormarada wadamada faqriga ah, Iwm
Hadaba ayaamahaan warar aan fiicneyn baa kasoo baxaya aan dhagaha islaamka u fiineyn, taasoo maqaamkiisii hoos udhigeysa iyo sumcadii islaamku uhayeen hoos udhigeysa, micnaheeduna ma’ahan in wanaaggii Sacuudiga oo burburay ee aan qaarkood soo sheegnay balse waa loobaqayaa.
Waxaa inta uu yimid wiilkan dhaxal sugahaa ah ee Maxamed binu Salmaan inta laga dhigey dhaxal sugaha waxa uu la soo ban baxay dagaal uu kuhaayo kudhaqankii shareecada islaamka isagoo ay marwaliba kasoo daahirayaan waxyaabo aan lagu farxin.
Arrimihii u dambeyey oo uu sameeyey haddaan wax kataabano waxaa kamid ah
– Inuu furey meelo lagu ciyaaro iyo goobo koob-ka-ciyaar lagu sameeyo
– In ikhtilaadkii (isdhexgalka raga iyo dumarka ajanabiga kala ah) ay iskumeel lagu qoobka ciyaarayo.
– Inuu hoos u dhigey dacwadii hay’ada Fariqada kheyrka iyo kareebida munkarka ee ka shaqeyn jirtay Sacuudi Carabiya.
– In xittaa uu bedelay boor ku dhaganaa wadada aada Medina Al-munawara oo ku qorneyd ‘Waxaa gali kara dadka muslimka oo dowladiisu fujisay loona bedelay aaga xaramka.
– In la sameeyey xarumo shaneemooyin oo la iskugu yimaado.
– Inuu mamnuucay in makarafoonka Salaadda kor loo qaado oo ay diideen in banaanka laga maqlo Quraanka Salaada marka la tukanayo.
– In ay ku dadaleyso in wadanka laga dhigo wadan loosoo dalxiis tago, dabcan waxa ka dhalan karana waad dareemi karnaa.
– In culumadii laftirkoodii wax isbida Ciqaab la kulmayo
– In Qadiyadihii Islaamka ee guud aad moodid inuu ka xuub-siibanayo Sacuudi Carabiya, xittaa markaan looga baqayo afka inuu juuqda xittaa ka gabo iyo arrimo kaloo badan.
Hadaba arrinkaas dib u socodka ee wadanka ugu sharafta badan arlada ay maamulka haya ku dhaqmayaan waa arrin nawada saameyneysa oo loo bahanyahay in loo duceeyo.
Ujeedadeyduna waxa ay ahayd bal inaad ila aragtiin halka Turkiga laga keeney iyo halka loowado, sidoo kalana halka Sacuudiga joogi jirey iyo halka loo wado inaan arragno. Hadaba waxaa muhiim ah arrimaahaas oo dhan in si fiican loo darso adduunyada aan maanta ku noolnahay iyo isbadalada ka socda inaan la socono waa muhiim. Xillaga lagu jiro oo ah xilli adag waxaa muhiim ah inaan Diinteena gows dambeedka ku qabsano oo ku dhaqankeedana ku dadaalno lana isku soo duceeyo in Illlaahay mideeyo umadeena islaamka.
Illaahay iimaanka hanagu sugo, Khaatumadana Allaha noo wanaajiyo.
Markii aan ogaaday dhalinyarada Soomaaliyeed inay kala garan la’yihiin cida qaranka duminayso iyo mucaaradnimada waxa ay tahay, ayaan waxaan go’aansaday inaan qoraalkaan soo saaro.
Sawirkaan wuxuu muujinayaa rashadaha siyaasadeed ama siyaasad-xumada waxyaabaha ka dhalan kara.
Soomaaliya uma baahno rag xoog leh laakiin waxay u baahan tahay hay’addo dowladeed oo adag. In kasta oo baahi weyn loo qabo hoggaan waxqabad leh, haddana Soomaaliya waxay u baahan tahay hay’ado madax-bannaan oo cabsi gelin kara masuuliyiinta dalka xukuma. Haddii aan la helin hay’ado hagaagsan, Soomaaliya waxay ku hungoobi doontaa gacanta hoggaamiyayaal is-xilqaamay oo aan ixtiraamayn xukunka sharciga iyo dadka.
Qoraalkaan waxaan ku qaada dhigayaa farqiga u dhaxeeyo mucaaradnimada iyo qarandumisnimada, waxaana ku qaada dhigayaa qodobada aan isleeyahay waa muhiim in dadkaaga ay wax ka ogadaan.
Waa maxay Mucaaradnimada?
Siyaasadda, mucaarad wuxuu ka kooban yihiin hal ama in ka badan xisbiyo siyaasadeed ama kooxo kale oo abaabulan oo ka soo horjeedda, ugu horrayn feker ahaan dowladda, xisbi ama koox gacanta ku haysa siyaasada dalka, gobol, ama hay’ad kale oo siyaasadeed. Heerka mucaaradka wuu ku kala duwan yahay hadba xaaladaha siyaasadeed. Tusaale ahaan, nidaamyada kali talisnimada iyo kuwa xorta ah, mucaaradnimada waa la kala horreeyn karaa.
Xisbiyada mucaaradka, ama dadka mucaaradka ku ah dowlad dal ka talisa waa dad xambaarsan afkaar, mabaadii, aragtiyo siyaasadeed. Waa dad xambaarsan mabaadii iyo aragtiyo si bulshadooda ugu badbaadiyaan abaaraha soo noqnoqda, ka shaqeeya sidii ay ugu xorroobi lahayeen deeqaha beesha caalamka, ka faa’idaysta wax soo saarka dalkooda iyo awooda dhalinyarada Soomaaliyeed, dhisida ciidan xoog leh oo ku dhisan mabaadiida qarannimada iyo anshax wanaaga.
Doorka ugu weyn ee Mucaaridku waa inay wax weydiyaan dowladda markaas jirto oo ay kula xisaabtamaan shacabka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan muuqaalo macno leh, sida akhristayaasha ay u arki karaan markay ka fekerayaan aragtida doorka hoggaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya.
Xisbiyada mucaaradka waxay lahaan karaan aragtiyo saameyn ku yeelan kara natiijooyinka ka dhalan kara hab-dhaqankooda. Sidoo kale qaabka ay u wada shaqeeyaan axsaabta mucaaradka ayaa saameyn ku yeelan kara xassilooni-darada dal – haddii ay ku guuleystaan wada shaqeynta iyo dhismaha “nidaamka siyaasadeed oo xassilooni ku dhisan” waxaa kor-u-kaca fursadaha ay ku ridayaan dowladda.
La xisaabtanka Xukuumadda
Aqoonyahan Dr. Brash wuxuu leeyahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee Mucaaradku waa inay si joogto ah wax u waydiiyaan Dowlada. “Dowlad kasta waa inay la xisaabtanto shacabka markasta, Mucaaradka wanaagsanna wuxuu tooshka ku ifiyaa arrimaha culus si deg deg ahna waa loo xallin karaa”.
Wuxuu yirri “Mucaaradka firfircoon wuxuu si adag uga doodaa sharci dejinta Golaha iyo inta lagu gudajiro hawsha Guddiga Xulista si loo hubiyo in sharcigu helo tixgelin taxaddar leh.”
Dr. Brash wuxuu leeyahay ka mid noqoshada Mucaaradka kuma koobna oo kaliya inaad mucaaraddo Dowlada. “Waxaa jira mararka qaarkood oo Mucaaradku ku raacaan Xukuumadda. Haddii xalka ay Xukuumaddu soo jeedisay uu leeyahay taageero ballaaran, oo si qumman u dhisan, markaa waa iska caadi in Mucaaradku oggolaadaan “
“Xisbiyada mucaaradka ma haystaan ilo isku mid ah sida Dowladda iyo Fulinta, marka waa inay u shaqeyaan laba jibbaar si ay u helaan natiijooyin isku mid ah”, ayuu yiri Dr. Brash.
Dawladdu waxay marin u leedahay waaxaha dawladda iyo la taliyayaasha si ay u dejiyaan siyaasaddooda, halkaasoo Mucaaridku inta badan ku khasban yihiin inay maraan wadooyin kala duwan si ay u helaan macluumaad isku mid ah.
Sidoo kale waa muhiim in hogaamiyaha uu si dhaw isha ugu haayo waxa ay dadweynuhu dhahayaan ama ay ka qabaan, baahida iyo rabitaanka – maxaa yeelay waa halka ay ka heli karaan dowladda marka ay timaado olole doorasho.
Dr. Brash wuxuu leeyahay waxaa jira arimo qaarkood “mararka qaarna ay sababto dayacaad Dowladeed” oo noqota barxada ugu weyn ee Mucaaradka. Wixii ku saabsan doorashada, waxaa ka mid ah ka-dhimista canshuuraha, sharciga iyo kala dambeynta, arrimaha heshiiska iyo waxbarashada.
“Doorka kale ee ugu weyn ayaa ah soo jeedinta waxyaabo kale oo ka duwan waxa ay dowladdu sameyneyso si dadweynahu ay u helaan faa’iidada doodaha siyaasadeed ee u dhexeeya jihooyinka kala duwan,” ayuu yiri Bill English, oo xubin ka ahaa xisbiga mucaaradka ee New Zealand oo leh xubnaha ugu badan ee Baarlamanka la doortay 2002. Doorka kale ayaa ah matalaada mucaaradka munaasabadaha rasmiga ah, sida qado sharafta dowlada.
Mucaaradka siyaasadeed ee dhabta ahi waa astaamaha lagama maarmaanka u ah dimuqraadiyadda, dulqaadka, iyo ku kalsoonaanta awoodda muwaadiniinta ee ay ku xallin karaan khilaafaadkooda qaab nabadeed. Jiritaanka mucaaradnimo, waxay toosisaa hab-dhaqanka dowladda waxaana halkaas ka bilaabma tartan ah in wax isla sixida ay waajib tahay.
Waa maxay qaran-dumisnimada?
Qaran-dumisnimada waa dad aan afkaar iyo mabaadii aan xambaarsaneen, waxaana kaalinta koowaad kaga jira warbaahinta aan tayada fiican lahayd. Warbaahinta waa aaladaha kala duwan ee loo isticmaalo warbaahin iyo war-isgaarsiinta. Warbaahinta haddii ay noqdaan kuwa u adeega dad gaar ah oo dano gaar leh, islamarkiiba waxaa laga dareemaa xasilooni darada dalka. Sidoo kale waxay kiciyaan shacabka iyo ciidanka dalka, waa sida Soomaaliya ka taagan maalmahaan. Ciidan shaqadiisa waa illaalinta shacabka iyo qaranimada Soomaaliyeed. Ciidamada waajibaadka saaran waa inay dhexdhexaad ka noqdaan xaalada siyaasadeed ee dalka, mana loo isticmaali karo dano siyaasadeed.
Qaran-dumisnimada waxaa lagu tilmaami karaa ururo aan lahayn mabaadii iyo afkaaro oo shacabka dan u ah, kali danahooda u gaarka ah. Marka aad fiiriso siyaasada Soomaaliya ee maanta ka taagan way adag tahay inaad kala saarto cida u doodayso qabiil iyo cida u doodayso qaran. U fiirso qofka siyaasi taageeraayo wuxuu u taageerayaa waa qabiil dartiisa ee kama ahan muwaadinnimo – adigaba waad soo baari kartaa qodobkaas.
Gunaanad, ma jiro dowlad ama urur siyaasadeed oo soo koobi kara danaha bulshada oo dhan. Dawladnimada qarnigan 21aad waxay u baahan tahay xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan oo ku kobcaya mabaadi’da guud ee xorriyadda, caddaaladda iyo wadajirka, gaar ahaan Soomaalida wax natiijo ah waa ay ku keeni waysay waxa ay nidaam ku sheegeen 4.5 (awood-qeybsiga qabiilada) sababo kala duwan awgeed.
Aniga aragtidayda sida ay ila tahay Soomaali waxay u baahan tahay dastuur ogalanaayo; iyada oo loo marayo cod aqlabiyad ah- xisbiga guuleysta, iyo gaar ahaan hogaamiyaha ay doorteen xisbiga inuu noqdo madaxweyne. Soomaaliya uma baahno rag xoog leh laakiin waxay u baahan tahay hay’addo dowladeed oo adag. In kasta oo baahi weyn loo qabo hoggaan waxqabad leh, haddana Soomaaliya waxay u baahan tahay hay’ado madax-bannaan oo cabsi gelin kara masuuliyiinta dalka xukuma. Haddii aan la helin hay’ado hagaagsan, Soomaaliya waxay ku hungoobi doontaa gacanta hoggaamiyayaal is-xilqaamay oo aan ixtiraamayn xukunka sharciga iyo dadka.
Jean Jacques Rousseau (1912-78), waa mid ka mid ah falsafadleyda siyaasadeed ee ugu cilmiga badnaa uguna caansanaa qarnigii 18aad. Rousseau waxaa lagu tiriyaa inuu saameyn ku yeeshay kacaankii Faransiiska iyo gaar ahaan horumarka fikirka siyaasadeed, cilmiga bulshada iyo waxbarashada casriga ah. ‘Dardaaranka guud’; wuxuu ku dooday – in bini’aadamku awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo hal ajande guud oo ka dhexeeya dadka iyo dowladda.
Ururada siyaasadeed ee mucaaradka waa ururo bulsheed oo leh waxqabad, waxay muujiyaan danaha qaranka, waxay la socdaan wax qabadka la’aanta hay’adaha siyaasadeed iyo kuwa dowladda. Xisbiyada siyaasaddu waxay tusaale u yihiin ruuxda dagaalka; u diyaar garow ficil siyaasadeed iyo iska hor imaad. Waa wadada kaliya ee qaab ahaan loo abaabulo aragtiyaha kala duwan ee bulshada. Bulshada casriga ah, xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka waxay leeyihiin shaqo muhiim ah dalka iyo mustaqbalka dowladnimada ee ummad kasta.
Doorka mucaaradka waa mid muhiim u ah dimuqraadiyadda wuxuuna si toos ah ula hadlayaa mustaqbalka Soomaaliya. Mucaaridku waxay doorar kala duwan ku leeyihiin baarlamaanka, iyagoo matalaya deegaanka ay ka soo jeedaan, xagga siyaasada, horumarinta siyaasada iyo fulinta sharciyada. – Hadda waa gabagabo caqli gal u ah dadka siyaasada u dhuun duleela; in adduunku si dhakhso leh isu beddelayo oo xukumaddu ku qasban tahay inay isku beddesho qaab la mid ah.
Sida wadamada kale ee carabta, bisha barakaysan ee Ramadaan waa munaasabad bulsho iyo mid diimeed oo muwaadiniinta ay ku dhaqmaan cibaadooyinkooda sanadlaha ah, laakiin masiibada Corona ayaa ka hor istaagtay qaar badan oo ka mid ah taas, iyada oo loo eegayo tirada sii kordheysa ee infekshinka iyo dhimashada fayruuska.
Yamaniyiinta, / bulshooyinka carabta badankood, waxay is weydaarsan jireen booqashooyinka habeenada Ramadaan, qoysaskuna waxay is weydaarsan jireen casuumaadaha afurka iyo cashada, halka salaada taraawiixda ee masaajida ay tahay muuqaalka ugu caansan ee xilliga Ramadaanka sanad walba, marka lagu daro howlaha bulshada sida cajaladaha banaanka, gaar ahaan caasimada, Sanca.
Si kastaba ha noqotee, caadooyinkani way maqnaayeen ama si weyn ayey dib ugu noqdeen bishan barakeysan, faafitaanka “Covid 19”, maadaama dad badani ka gaabsadeen inay ku casuumaan eheladooda iyo kuwa ay garanayaan inay la afuraan.
Issam Axmed, oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Sanca, ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta uu ku yiri: “Tiro ka mid ah dadkii aan is naqiinay ayaa u dhintay cudurka loo yaqaan Corona virus, kii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa mid ka mid ah ilma adeeradeey laba maalmood ka hor. Sidaas darteed, dhowr bilood ka hor, waxaan joojiyay wax kulan ah oo aan la yeelan lahaa dadka aan garanayo iyo kuwa aan qaraabada nahay, waxaana ku xaddidanahay wada xiriirka.
Wuxuu intaas ku daray: “Mar dambe kama baxo guriga mooyee, oo waxaan ku maamulaa shaqadayda taleefanka, nasiib darro, Ramadaan-ka ayaa yimid sannadkan iyada oo ay jirto mowjado ballaaran oo faafidda fayraska, sidaa darteed dhammaan kulammada bulshada ee dhaca inta lagu jiro habeenada Ramadaan waa la joojiyay. ”
Issam oo sii hadlaya ayaa yidhi: “Ilaa salaadaha aan ku tukado gurigayga oo buuxa, waxaan ku tala jiraa bishan in aan ku guto waajibaadka waajibka ah, shaqo ka joojinta, Taraawiixda iyo tahajjud.”
Taas badalkeeda dad badan oo ka joogsanaya gudashada caadooyinkooda Ramadaanka, kuwa kale ayaan dan ka lahayn wax kasta oo dhacaya, waxayna sii wadaan inay ku dhaqmaan caadooyinkooda Ramadaanka, iyagoo aaminsan in waxa dhacaya ay yihiin buunbuunin dhinacyada caalamiga ah ama shirkadaha dawooyinka sameeya ama shirqool caalami ah. “Ka-qaybgal kooxeed”.
Muuqaal fiidiyow ah oo ay si weyn ugu faafinayeen dadka u dhaqdhaqaaqa barta xiriirka bulshada, qaarkoodna waxay u arkeen inuu muujinayo mowqifka iyo xaaladda muwaadiniin badan oo aan weli rumaysan “sheekada korona.”
Magaalada Sanca, kooxda “Xuutiyiinta” waxay ka digayaan faafinta wixii hadal ah ee la xiriira faafitaanka Corona ama dhibbanayaasheeda, in kasta oo la diiwaangeliyey dhimashooyin badan oo ka jira aagagga ay gacanta ku hayaan, oo ay ka mid yihiin hoggaamiyeyaasha darajooyinka koowaad iyo labaad sida Wasiirka Gaadiidka Zakariya. Al-Shami, iyo Agaasimaha Baarista Dambiyada, Suldan Zaaben, iyo warar aan la xaqiijin oo ku saabsan Geerida la-taliyihii Golaha Sare ee Siyaasadda, Yaxya al-Shami, iyo geerida xaaskiisa.
Mid ka mid ah hogaamiyaasha Xuuthiyiinta ayaa ku andacooday in “aqoonta caqiidada ay tahay tii doorka koowaad ka laheyd badbaadinta Yamaniyiinta ka imanaya Corona.” Dayaca iyo qarinta xaalada dhabta ah ee musiibada Corona waxay leedahay doorkeeda ku aadan sii wadida tiro muwaadiniin ah si joogto ah ku dhaqmaan caadooyinkooda iyo dhaqankooda Ramadaan, adigoon qaadin taxaddarrada lagama maarmaanka ah sida dhowrista fogaanta Bulshada iyo ka walwalka xiritaanka afka.
Intaas waxaa sii dheer, maamulka Xuutiyiinta kuma qasbayo muwaadiniinta inay qaadaan tallaabooyin ka hortag ah sida xirashada maaska, iyo mamnuucaya isu imaatinnada munaasabadaha bulshada, iyo tiro ka mid ah bulshooyinka ayaa sii waday ku dhaqanka caadooyinkooda inta lagu jiro bisha Ramadaan si dabiici ah iyada oo aan wax tallaabooyin ah ama taxaddar ah la helin.
Bariga dhexe15 hours ago